China Harley môtô mpamokatra fitaratra ary mpamatsy | Shentuo
Ataovy miavaka sy famolavolana
Windshield an'ny jeneraly Harley
Windshield an'ny KAWASAKI
Fitoeran'ny valin'ny môtô
Vespa GTS Motor Cushion
Fiara fitaratra moto Harley
Tselatra fitaratra moto ho an'ny KYMCO 250 300
Fiara fitaratra môtô an'ny Honda LEAD 125
Fitaratra fitaratra BMW F-1200GS
Takelaka PMMA, nantsoinay koa hoe Acrylic. Izy io dia karazana plastika misy mangarahara sy thermoplasticity tena tsara. Tonga hatramin'ny 99% ny mangarahara, ary 73,5% ho an'ny UV. Ny fitaovana dia manana tanjaka mekanika tena tsara, fanoherana ny hafanana ary faharetana tsara, ary izy io koa dia misy fanoherana ny harafesina sy fanoherana Insulation.
Anaran'ny vokatra: Fiara fitaratra moto Harley
Modely môtô namboarina: Harley General
Size: 35CM 58CM25CM * * * 54CM62CM 73CM
Fiara fitaratra moto Harley Ity no Harley General ho an'ny maodelin'ny môtô
Ny fitaratry ny fitaratra dia natao niaraka tamin'ny dinamika milamina, ny fisehoany tsara tarehy ary ny fampiharana azy matanjaka. Ny fitaratra miaraka aminy IBX dia hahatonga ny dianao manaraka hahafinaritra kokoa.
1. Atsofohy ny fitaratra eo amin'ny moto mba hampihena ny fitarihan'ny rivotra amin'ny vatan'ny mpitaingina azy
2. Ataovy ahazoana aina kokoa ny dia lavitra, fanandramana vaovao amin'ny dia samihafa
3. Ny akora PMMA dia vita amin'ny akrilika misy fiatraikany lehibe, izay manome tanjaka sy fahalalahana fanampiny ho an'ny efijery tsirairay. Ny fitaovana dia manana tanjaka mekanika tena tsara, fanoherana ny hafanana ary faharetana tsara, ary koa misy fanoherana ny harafesina sy insulation.
4. Ny hatevin'ny fitaratra eo amin'ny moto dia manampy amin'ny fidirana amin'ny hovitrovitra amin'ny hafainganam-pandeha avo lenta ary manome fanoherana ny famakiana na ny fikolokoloana
Fampiharana ny fitaovana
Ny fitaratry ny tadio dia mifanaraka amin'ny fombanao, azo antoka ary mahazo aina kokoa
Mihodina ny rivotra kokoa, noho izany manome traikefa mampiadana sy milamina ny mpamily.
Tsy misy fitaratra
Raha tsy misy fitaratra, ny loha, tratra ary ny lamosina dia iharan'ny rivotra mahery, izay mahatonga azy ireo ho azon'ny rivotra mangatsiaka.
Ny vokany aorian'ny fametrahana fitaratra
Miaraka amin'ny fitaratra, ny 70% -n'ny rivotra dia voaro amin'ny hatsiaka
Fonosana namboarina ho an'ny moto IBX, manasongadina ny marika, fiarovana maro sosona, misoroka tsara kokoa ny akanjo, ho anao hanolotra ny vokatra tonga lafatra.
Amin'ity sehatra ity, izahay no manam-pahaizana azonao itokisana. Natoky anao, ataovy ny tsara indrindra vitako. Serivisy matihanina, antoka ara-kalitao.
Manokana izahay amin'ny fampandrosoana sy ny varotra andian-tsarin'ny motera ary ny kojakoja môtô. Omeo mpanjifa amina karazana vokatra avo lenta.
IBX dia iray amin'ireo marika ananantsika ary manana laza malaza any amin'ny firenena maro manerantany.
Previous: Fitaratra fitaratra moto Harley Dyna
Manaraka: Fiara fitaratra manerantany
Windshields moto Harley Davidson
Windshield Harley Dyna
Windshield an'ny moto Harley
Fitaratra fitaratra moto Harley Dyna
NO 538-9, Làlana Yinshan, Nancheng, Distrikan'i Huangyan, Tanànan'i Taizhou, Faritanin'i Zhejiang, Sina
Vokatra asongadina - Sitemap Windshield an'ny Honda Nmax, Vespa Gts 300 Gtv fitoeran-kitapo, Vespa Gts Gtv 300 Atraketraky ny kitapo, Pedalin'ny gazy moto, Kitapo ho an'ny sekolin'i Kawasaki, Tongotra môtô fisaka,